Taliyaha Sirdoonka Somaliya oo 1500 Hawlwadeena ka Eryay Shaqadii Sirdoonka | Berberatoday.com
Taliyaha Sirdoonka Somaliya oo 1500 Hawlwadeena ka Eryay Shaqadii Sirdoonka
Hargeysa(Berberatoday.com)-Taliyaha Sirdoonka ee Soomaaliya Jeneraal Cabdillaahi Gaafow ayaa xilal ay hayeen ka qaaday ilaa 1,500 oo ka mid ah hawlwadeennada sirdoonka ee dalkaasi. Sida lagu sheegay warbixin lagu baahiyay shabakadda wararka ee AllAfrika, taliyaha sirdoonka ee Soomaaliya wuxuu ku sababeeyay xil-ka-qaadista masuuliyiintan inay ku guuldarraysteen gudashada waajibkooda ee la xidhiidha amniga.
Warbixintan waxay intaa raacisay in uu Cabdillaahi Gaafoow sheegay in sidoo kale xil-ka-qaadistani ay qayb ka tahay dardar-gelinta hay’adda Sirdoonka Soomaaliya, isla markaana uu qorshaynayo in beddelkooda la keeno masuuliyiin iyo xubno firfircoon oo door mug leh ka qaata la-dagaallanka kooxda Alshabaab iyo gudbinta xogaha la xidhiidha.
Cabdixakiim Farey oo warbixinta lagu sheegay in uu ahaa madaxii Sirdoonka ee Muqdisho ayaa ugu dambeeyay masuuliyiinta xilalka laga qaaday. Hawl-gallada hay’adda Sirdoonka Soomaaliya ayaa lagu sheegay In hoos-u-dhac ku yimi darteed la doonayo in la xoojiyo. Dalka Soomaaliya ayaa la rejaynayaa dhammaadka bisha dambe ee November inay ka qabsoonto doorasho aan toos ahayn oo lagu dooranayo madaxweynaha dalkaas.
Xarakada Al-shabaab ayaa hawlgallo u badan is-qarxin iyo weerar gaadmo ah waxay ka fuliyaan gudaha Soomaaliya, taas oo ay u dambaysay weerar ay shalay oo Sabti ahayd ay ku qaadeen Hudheel laga cunteeyo oo ku yaalla Muqdisho, halkaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ba ka dhashay.